Deg Deg: Wasiir Xoosh oo Baarlamaanka raali galiyay iyo howshiisa shaqo oo loo fasaxay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Deg Deg: Wasiir Xoosh oo Baarlamaanka raali galiyay iyo howshiisa shaqo oo...
Deg Deg: Wasiir Xoosh oo Baarlamaanka raali galiyay iyo howshiisa shaqo oo loo fasaxay
Wasiirka Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa saaka hor-tagay Golaha shacabka, isagoo ka raalli geliyay qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka, kaasoo uu kaga hor-jeestay qaraarkii uu Baarlamaanka ku diiday go’aankii Maxkamadda sare.
Hadal uu Wasiirka ka hor-jeediyay Xildhibaanada ayuu ku dalbaday in laga cafiyo hadaladii ka soo yeeray, isla markaana uu raalli gelin ka bixinayo.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa aqbalay raalli gelinta Wasiir Xoosh, waxaana ay u fasaxeen inuu howlihiisa shaqo sii wato.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ku kala qeybsamay xaalad uu abuuray Wasiir Xoosh, kaddib markii uu ka baaqday u yeeristii Baarlamaanka, waxaana Wasiirka uu ku sigtay in dib u eegis lagu sameeyo xilkiisa, codka kalsoonidana lagala laabto.
Olole ay qeyb ka ahaayeen madaxda dowladda iyo Wasiiro ayaa lagu guuleystay in lagu xaliyo xiisadii u dhaxeysay Wasiir Xoosh iyo Baarlamaanka, kaddib markii arbacadii la soo dhaafay uu kooram la’aan ku baaqday kulankii Baarlamaanka ee lagu waday in go’aan looga gaaro xil heyntiisa
Previous article9 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay Yemen iyo Masjid ku yaala Libya oo la weeraray
Next articleCabduqaadir Nadaara oo loo magacaabay la taliyaha RW ee dhanka Warbaahinta